Chikamu chemoto, nyaya yekushivirira | Zvazvino Zvinyorwa
Chikamu cheMoto, zita rekutanga muChirungu) ibhuku raKen Follet, munyori akabudirira kwazvo weBritish wenguva dzazvino. Siginecha yemunyori uyu yakafanana nekukunda, zvese padanho rekushambadzira uye nekushoropodza kwemabhuku nekutambira vaverengi. Hazvishamisi kuti zvinyorwa zvake - mazhinji acho ari mukati merudzi rwemanyowani enhoroondo - akamushandura kuva munyori anotengesa zvakanyanya.
Pakati pezvisikwa zvake zvinorumbidzwa kutenderera pasirese pane trilogy "The Century" (The Century) uye akateedzana Mbiru dzenyika. Zvakananga, Mbiru yemoto (2017) chikamu chechitatu cheiyi saga yazvino. Izvo, zvakatanga nezita risingazivikanwe muna 1989 uye rakapedzwa ne prequel, Rima nemambakwedza, mu 2020.
1.1 Kutanga mabhuku
1.2 Ken Follet anozivikanwa zvakanyanya maanoveli
1.2.1 Trilogy Yezana Remakore - Zana Remakore
1.3 Nhevedzano Mbiru dzePasi
1.3.1 Mbiru dzePasi (Iyo Mbiru dzePasi, 1989)
1.3.2 Nyika isina magumo (Nyika Isingagumi, 2007)
1.3.3 Chikamu cheMoto (Chikamu cheMoto, 2017)
1.3.4 Rima nemambakwedza (Manheru neMangwanani, 2020)
2 Chikamu chemoto, nyaya yekushivirira
2.1.2 Rudo rwusingabviri
Kenneth Martin Follet akaberekwa musi waJune 5, 1949 muCardiff, Wales, United Kingdom. Vabereki vake - Martin naVeenie Follet - vaive maKristu anochengetedza. Saka, Aingova nekuverenga senzira yake yaanofarira yekutandara, nekuti airambidzwa kuona terevhizheni nekuenda kumamuvhi. Gare gare muma1950 mhuri yaFollet yakagara muLondon.
Ikoko, wechidiki Kenneth akadzidza Philosophy paUniversity College yeLondon pakati pa1967 na1970. Mushure mekupedza kudzidza, akapedza mwedzi mitatu ari kosi yeutapi venhau asati atanga basa mupepanhau Maodzanyemba Walles Echo kubva kuCardiff. Mushure memakore matatu muWales, akadzokera kuLondon kunobatana nechikwata che Manheru kumira.
Follet akatanga basa rake rekunyora muna 1974 nezvakateedzana Maapulo Carstairs —Pazita rekudanwa naSimon Myles-- vhoriyamu yake yekutanga yaive Tsono huru. Ipapo akasaina nezita rake chairo Shakeout (1975) uye Ndebvu Dzakabvutwa (1976), vese kubva kuSpy Roper akateedzana. Shure kwaizvozvo, pakati pa1976 - 1978 munyori weWales akaburitsa mabhuku matanhatu akasainwa nemanyepo Bernard L. Ross, Martin Martinsen naZachary Stone.
Kubva muna 1978 Follet haana kushandisa alias zvakare, kubvira gore iro rakatanga Chitsuwa chemadutu… Uye hupenyu hwake hwakashanduka zvachose. Iwo musoro wezita waive wekutanga nhanho huru inoenda mukurumbira mukati mebasa rakanyatsobudirira riine anopfuura makumi mana emanoveli kuchikwereti chake. Nhasi, munyori weCardiff anozivikanwa pasi rose se best seller yezvinyorwa zvekare uye nyaya huru dzezvakaitika.
Ken Follet anozivikanwa zvakanyanya maanoveli
Chinokosha chiri muna Rebecca. (Kiyi kuna Rebecca, 1980).
Murume anobva kuSt. (Murume anobva kuSt, 1982).
Mapapiro egondo. (Pamapapiro eMakondo, 1983).
Mupata weshumba. (Rara pasi neShumba, 1986).
Nzvimbo inonzi rusununguko. (Nzvimbo Inonzi Rusununguko, 1995).
Wechipiri mapatya. (Wechipiri Mapatya, 1997).
Ngozi yakanyanya. (Jackdaw's, 2001).
Muchena. (Whiteout, 2004).
Trilogy Yezana Remakore - Zana Remakore
Kudonha kwehofori. (Kuwa kweGiants, 2010).
Nguva yechando chenyika. (Nguva yechando yeNyika).
Chikumbaridzo chekusingaperi. (Mugumo wekusingaperi, 2014).
mudungwe Mbiru dzenyika
Iyi saga yakapihwa pamusoro Ken follet chinzvimbo chekupedzisira chemunyori anotengesa zvakanyanya. Uye zvakare, yega yega mavhoriyamu akateedzana ane angangoita mapeji mazana mapfumbamwe (muhuwandu, pane anopfuura zviuru zvina mapeji). Saka, muverengi anoramba akapakatira kusvika kumagumo kunyangwe hurefu hwerugwaro. Izvo zvinoratidza kugona kwerondedzero uye kudzika kwevanyori vakagadzirwa nemunyori weCardifian
ari mbiru de la Pasi (Mbiru dzePasi, 1989)
Iyi nhoroondo yenhau inoverengeka inonongedzera kuzviitiko zvechirungu chisimba (zana ramakore gumi nemaviri). Kunyanya kune iyo nguva pakati peiyo White Ship chiitiko uye kurwiswa kwaArchbishop Thomas Becket. Inosanganisirawo ndima pamusoro pevafambi veSantiago de Compostela munzira yavo kubva kuFrance kuenda kuchamhembe kweSpain.
Nyika isingaperi (Nyika isina magumo, 2007)
Kufanana neyekutangira bhuku, chiitiko ichi chinoitika muKingsbridge (guta rekunyepedzera), asi muzana ramakore regumi nemana. Pamusoro pe, denda dema nemhedzisiro yaro kukondinendi yeEuropean —Zvakaperera nechetatu chevagari munyika dzakaita seItari kana England- inobata yakawanda yechirongwa. Pamusoro pezvo, nhoroondo yacho inopinda nechisimba kuna Edward III kuFrance nekuvandudzwa kwemaguta epanguva iyoyo.
Mbiru yemoto (Chikamu cheMoto, 2017)
Muna 1558, Kingsbridge raive guta rakakamurwa nekunyanyisa kwechitendero. Zvichakadaro, Ned Willard (protagonist) ari mukushora kwesarudzo kune iye waanoda, Margery Fitzgerald. Mamiriro ezvinhu anowedzera apo Elizabeth I akagadzwa korona yeMambokadzi weEngland. Ipapo, humwe humambo hweEurope hunotanga kurangana kuripidigura.
Rima nemambakwedza (Manheru neMangwanani, 2020)
Iyo prequel kune iyo yose nhevedzano inotanga muna 997, muKingsbridge, pakati peaya anonzi Nguva yeRima.. Nekudaro, yaive nguva iyo vanhu vemuraini vaifanira kurwisana nekurwiswa kweropa neRopa kweVikings neWales.
Mbiru yemoto, nyaya yekushivirira
Unogona kutenga bhuku pano: Mbiru yemoto
Muhurukuro neSpanish pepanhau Nyika (2017), Follet akatsanangura izvozvo Mbiru yemoto "Iri ibhuku rinotaura nezve shiviriro." Nekuti, kunyangwe iri bhuku rine nharo rakanyura mumisoro yechitendero, harisi rugwaro nezve chitendero. Saizvozvowo, munyori weWales anonongedza chinangwa chake chekuburitsa hukama pakati pesimba, mari uye chitendero.
Muhurukuro imwechete, Follet anofananidza kunyanyisa kwechinamato kwezana ramakore rechiXNUMX pamwe nekuwedzera kuri kuita radicalism inoonekwa pasirese nhasi. Uku kunyanyisa kunopfuura chinamato, sezvo "kuchisvibisa" zvematongerwo enyika, hukama hwehukama uye kunyangwe nyaya dzesainzi. Semuenzaniso, munyori weBritish akanongedzera kuBretxit nehugandanga hweIslam muEurope.
Ned Willard, protagonist wenyaya iyi, murume wechidiki anobva kuKingsbridge akadzokera kumusha kwake paKisimusi 1558. Makore eruvengo nekusashivirira kwechitendero zvakapfuura pakati pevaKaturike nevaPurotesitendi. Nekudaro, kudeuka kweropa ndiko kwaive kwakakurumbira. Zvakaipisisa: Ned anoda kuroora musikana kubva kudivi rakatarisana, Margery Fitzgerald.
Nguva pfupi mushure mekunge Elizabeth I akwira pachigaro cheEngland. Mambokadzi, achiziva ruvengo rwakasimba rwunowanikwa mune imwe kondinendi, akaraira basa rake repachivande kuti rirambe rakangwarira. Kutyisidzira kukuru kwakamiririrwa nehama yake - chinzvimbo uye chinokwezva - Mary Stuart, Mambokadzi weScots. Ndiani aive neuto rake revakatendeka mukati nekunze kweBritish Isles.
Zvichakadaro, Ned anga achitsvaga asinganzwisisike Jean Langlais (hunhu hwakavanzwa kuseri kwezita rekunyepedzera, pakupedzisira, aive shamwari yehucheche). Mukufanana, rangano rinotarisa pakuedza kwakaitwa nevasori kuchengetedza kutonga kwaElizabeth I pakati pemhirizhonga yakaitika kubva kuElinburgh kuenda kuGeneva, kuwedzera kune akawanda mapurani epamba.
Panguva ino, iko kwechokwadi kukakavara kwakaziviswa, (zvese zveNed neMargery, uye geopolitical). Kunetsana kwacho kwaive kusiri pakati pevaKatorike nemaPurotesitendi. Hondo yaive pakati peavo vairegerera zvakanyanya - vakagadzirira kutaurirana chibvumirano - uye vavengi vavo vanodzvinyirira vakatsunga kumanikidza kwavo kuona kwepasirese chero mutengo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mbiru yemoto